Iyo Apple Watch Series 4 inoponesa hupenyu hwemurume ane atrial fibrosis | Ndinobva mac
Sezvo iwe ungangove uchitoziva, iyo Apple Watch mukuwedzera pakuve chakakura chishandiso semubatsiri kune iyo iPhone, zvakare Iyo inonyanya kubatsira munyika yehutano, nekuti nekutenda kwazviri zvinokwanisika kuongorora akateedzana ematambudziko ane chekuita nemoyo mutinhimira wemoyo, pamwe nekufema, pakati pevamwe, uye nezvimwe nebasa reECG rinosanganisira modhi yazvino.
Uye mune ino kesi, kutipa zano rekuti iyo Apple Watch ingabatsira sei munhu mune zvehutano nyaya, isu tichangobva kudzidza nyaya ye murume ane hupenyu hwakaponeswa neiyi Cupertino smartwatch, sekugovaniswa naTim Cook.
Tim Cook anogovera nyaya yemurume ane hupenyu hwakaponeswa neApple Watch yake
Sezvo isu takakwanisa kuziva, munguva pfupi yapfuura murume akafunga kutora Apple Watch Series 4, ndiko kuti, yazvino vhezheni yeApple smart wachi, iyo, sezvingangove iwe uchitoziva, inosanganisira mabasa akavandudzwa achienzaniswa neshanduro yapfuura, kunyanya mu nyaya dzehutano. Uye mune ino kesi, mazuva maviri chete mushure mekutenga kwako, yakamhan'ara nyaya yekusagadzikana kwemoyo rhythm uye yakati pfuurei kurova kwemoyo.
Mushure mekunyeverwa, vakaenda kuchipatara, uye yambiro iri kutaurwa yakanga isiri yezvishoma, zvachose, nekuti murume iwe wakabatwa uine atrial fibrosis, uye dai yanga isiri iyo wachi yeApple, pamwe angadai asina kukwanisa kutaura nezvazvo nhasi, semukadzi wake, Elissa Lombardo, akataura nezve yakakurumbira pasocial network Twitter.
Kuona iyo inonakidza nyaya iri mubvunzo, kuburikidza neTwitter futi, Tim Cook, CEO weApple, atora mukana wekutenda nekunyoraSekuratidza kwenyaya idzi, ndizvo zvinokurudzira kambani kuti irambe ichikura.
Ndinofara kunzwa murume wako ave kunzwa zviri nani, Elissa. Nhau sedzako dzinotikurudzira - nekutenda nekutizivisa! https://t.co/A7eV4tgS4U
- Tim Cook (@iku_cook) January 16, 2019
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch Series 4 yakachengetedza hupenyu hwemukomana ane atrial fibrillation
MuSpain pasina ECG ndingadai ndakaombera ...
Apple migove inopora zvishoma nezvishoma ichimirira musangano wemhedzisiro yemari
Podcast 10x15: Apple muna 2019